एपीएफको अपराजित यात्रा कायम – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
३ आश्विन २०७७, शनिबार ०१:४० English
एपीएफको अपराजित यात्रा कायम
काठमाडौं, २८ माघ । काठमाडौंमा जारी ढोरपाटन कप महिला डबल लिग भलिबल प्रतियोगितामा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफले अपराजित यात्रा कायमै राखेको छ । जारी लिगमा १३औं जित हात पार्ने क्रममा एपीएफले आयोजक ढोरपाटन क्लबलाई तीन ३–० को सोझो सेटमा हरायो ।
गोंगबुस्थित ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबको मैदानमा सोमबार भएको खेलमा एपीएफले आयोजकको टोलीलाई २५–५, २५–१५ र २५–१५ को सेटमा पराजित ग-यो । जितसँगै एपीएफ लिगको १३ खेलबाट ३९ अंक जोड्दै शीर्ष स्थानमा यथावत छ । समान खेलबाट ३६ अंक जोडेको न्यु डायमन्डले पनि पश्चिमाञ्चललाई सोझो सेटमा हरायो । दोस्रो स्थान पक्का गरेको न्यु डायमन्डले पश्चिमाञ्चलविरुद्ध सहज जित हात पार्ने क्रममा २५–१३, २५–१७ र २५–१९ को नतिजा निकाल्यो । मंगलबार हुने एपीएफ र न्यु डायमन्डको खेलले नतिजालाई असर पार्न सक्छ । यदि, डायमन्डले एपीएफलाई ३–० ले रोक्यो भने परिणाम सेट र प्राप्त औषत अंकका अधारमा निकाल्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, सोमबारै भएका अन्य खेलमा पशुपति क्याम्पसले दोहोरो हार बेहो-यो । काभ्रेको चन्डेश्वरी क्लबको टोलीसँग २२–२५, २५–२२, २५–२३ र २५–१४ को सेटमा पराजित भएको पशुपति क्याम्पसले अर्को खेलमा जावलाखेलसँग २५–२१, २५–२१ र २६–२४ ले सेट गुमायो । एपीएफसँग पराजित भएको ढोरपाटनले सोमबारकै खेलमा चन्डेश्वरीलाई २५–१२, २५–२१ र २५–१३ ले हराउन सफल भयो ।
प्रतियोगिताको अन्तिम दिन मंगलबार दुई खेल हुनेछन् । पहिलो खेलमा आयोजक ढोरपाटन र पश्चिमाञ्चलको टोलीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा दोस्रो खेलमा शीर्ष स्थानको एपीएफ र दोस्रो स्थानको न्यु डायमन्डबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । सोही खेलबाट उपाधि विजेताको टुंगो लाग्नेछ । उपाधि विजेताले स्वर्ण पदकसहित नगद २ लाख ५१ हजार पुरस्कार पाउनेछ .
२८ माघ २०७०, मंगलवार १७:३६ मा प्रकाशित